Hurumende Yokurudzirwa Kuita Musangano weTNF Sezvo Hupfumi Husisina Kumira Zvakanaka
Gurukota rinoona nezvevashandi, Muzvinafundo Paul Mavima, vanoti vari kuda kuti nhaurirano pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi pasi pegungano reTripartite Negotiating Forum, TNF, dziitwe mwedzi uno kunyange hazvo vashandi vari kuti hurumende haisi kuratidza kuzvipira.
Nyaya yekumbokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kana kuti lockdown yakonzerawo kuti zvinhu munyaya dzezvehupfumi zvisamire zvakanaka iri kupa vakawanda munyika kuti vakurudzire kuitwa misangano yeTNF kuti paitwe mubatirapamwe chuma chemuzukuru kuti nyika ibude mukanwa mamupere.
Asi ropa rakaipa pakati pemasangano ari muTNF riri kupa kuti gungano iri rive bhasikiti raTizirai rekuti uku riri kurukwa uku riri kurudunhurwa.
VaMavima vanoti havo vakazvipira kuita musangano weTNF mwedzi uno usati vapera. Vatiwo vanoda kuti misangano yeTNF iitwe kana pagore pane kaviri kari mubumbiro remitemo vachiti chinangwa ndechekuda kusimbisa gungano iri.
Asi munyori mukuru musangano revashadi reZimbabwe Congress of Trade Unions, VaJaphet Moyo, vati havasati vasumwa nezvekuti musangano ungangoitwa mwedzi usati waoera.
Vatiwo vashandi vari kuda kuti nyaya dzemihoro dzizeyiwe sezvo zvinhu zvave kudhura zvakanyanya.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr Israel Murefu, vanoti musangani uyu wakatononoka kutanga uye vanoda kuzeya nyaya dzenhomba yeCovid-19 kuti vangatengere sei vashandi vavo nhomba.
TNF yakava mutemo muna 2019 asi zvinhu gore rapera zvainge zvisina kumira zvakanaka sezvo vashandi nevashandirwi vaipomera hurumende mhosva yekuita zano ndega pane kuita nhaurirano kugadzirisa matambudziko munyaya dzezvemabasa nehupfumi.
Asi hurumende inoti ine chido chekuti gungano iri rishande sezvakatarwa pamutemo.